Plugins iPhone WordPress: Admin sy temotra
Alakamisy, Jolay 2, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Hatramin'ny fanavaozana ny bilaogiko sy ny fametrahana ny WordPress amin'ny Amazon S3, afaka nanala plugins amin'ny cache aho. Ny plugins caching dia tsy dia nilamina raha oharina amin'ny fanosehana ny sariko rehetra amin'ny S3. (Ny faktiora amin'ny volana voalohany: $ 0.50). Tsapako fa ny cache dia afaka mametaka fampisehoana fanampiny ivelan'ny tranokalako… saingy hanakana ahy tsy hanavao ilay tranokala amin'ny fanaingoana ho an'ny iPhone, Blackberry, ary ireo finday hafa. Ny olana dia hoe afaka mitsidika ny mpitsidika iray
Apple Mandray Fanamarihana avy amin'i Microsoft?
Talata, Jona 3, 2008 Alahady, Aogositra 23, 2009 Douglas Karr
Toa isan-kerinandro aho misintona fanavaozana serivisy iray hafa ho an'i Vista. Vao haingana izay, Vista dia nanana Pack Pack tamin'ny andro nitondran'i Apple ny fanavaozana 10.5.3 ho an'ny OS X Leopard. Hatramin'ny fanavaozana an'i Leopard dia efa nanana olana an-taonina maro aho tamin'ny fampiasana browser… na Safari izany na Firefox. Androany aho dia nanapa-kevitra ny hamerina hametraka ny Safari mba hahitako raha afaka manamboatra izany indray mandeha sy ho an'ny rehetra aho. Rehefa nanomboka ny fametrahana aho dia
Ny mpanjifanay dia mampiasa PCAnywhere ho an'ny olan'ny fanohanany. Mihazakazaka Vista aho - ka rehefa nanandrana nametraka ny mpanjifanay manana fahazoan-dàlana aho, dia nihaona haingana tamina hafatra tsy mifanaraka aho ary nijanona ny installer. Amin'ny fitsidihana ny tranokala Symantec, mazava ho azy ireo dia nanamboatra ny olana mifanentana miaraka amin'ny fanavaozana ny kinova 12.1. Ny snag? Mila mandoa $ 100 ianao amin'ny fanavaozana. Tsy maintsy manana aho, ka nandoa ilay $ 100 aho. Mandoa vola $ 100 ho an'ny iray